Ukuphupha irocket ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Irokethi ishukunyiswa kukuqhutywa kwejet yokuqhubela phambili. Ngokubanzi, imijukujelwa isetyenziswa njengezithuthi. Uphando okanye ukuqaliswa kweerokethi, umzekelo, kuthwala izihlwele eziluncedo kwiindawo ezingenakufikeleleka ebantwini kwaye ngenxa yoko zisebenza ikakhulu kwezenzululwazi. Kwingqondo yeembumbulu, imijukujelwa ikwaxhotyiswe ngezixhobo ezinjengeentloko zenyukliya njengezixhobo ezilawula kude kwaye ngaloo ndlela zenza imisebenzi yasemkhosini. I-Torpedoes isebenza ngendlela efanayo, kodwa ngokubanzi ineziqhushumbisi ezilula kwaye zisetyenziswa phantsi kwamanzi.
Ubume beerokhethi yerokethi yinto ebalulekileyo kuluhlu lwayo olukhulu kunye nesantya, kodwa akubalulekanga ekusetyenzisweni kwayo kwindawo yasimahla. E-Yurophu, izazinzulu ziye zabandakanyeka kuphando lwerokethi ukusukela nge1960s, eyathi yaqiniswa kukumiselwa kwe-ESA Space Agency i-ESA ngo-1975.
Irokethi yintetho yomntu yokuphanda: ngokukhawuleza, ukuqhubela phambili, nangaphezulu. Nguwuphi umntwana ongacingi ukuba ngamanye amaxesha ujikeleza esibhakabhakeni njengosomajukujuku kwinqanawa erokethi, ebhabha kwirokethi ngaphezulu kwamafu, mhlawumbi efumanisa iiplanethi ezazingaziwa ngaphambili okanye iinkqubo zelanga zonke?
Iphupha malunga nenqanawa ye-rocket ngokubanzi inxulunyaniswa nokunxanelwa i-adventure kunye nesidingo sokuhlola. Icala elinjengemfazwe lalomjukujelwa mhlawumbi lidlala indima ephupheni, ukuba iphupha eli liye lajongana nohlaselo lwerokethi kubomi bokwenyani okanye mhlawumbi lafumana into enje. Ukutolikwa kwamaphupha, imeko ekufumaneka kuyo isimboli yephupha ibalulekile nemeko yobuqu yephupha.
Kubantwana abaninzi, ukubhabha emajukujukwini nerokethi liphupha elihle. "Irokethi" isimboli yamaphupha ikwadlala indima kumaphupha abantu abadala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemijukujelwa. Ukuziphatha kwendiza kubaluleke kakhulu kuhlalutyo lwamaphupha. Fumana apha ukuba yintoni efihliweyo emva komfanekiso wephupha "lerokhethi":
1 Uphawu lwephupha «irokethi» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukuhamba kwerokethi ephupheni: ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni
1.1.1 Irokethi iqala ephupheni- iyaqala!
1.1.2 Ukubhabha kwi-rocket njengomphuphi: ngokukhawuleza kwaye akunakunqandwa
1.1.3 Irokethi yengozi ephupheni: yintoni ebhabha phezulu, iyehla
1.2 Iirokethi ezithile kutoliko lwamaphupha.
1.2.1 Uhlalutyo lwamaphupha "iRocket Space Rocket": Kwiinkwenkwezi!
1.2.2 Ukuphupha abaqalisi beerokethi: imfazwe okanye uxolo?
2 Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «irokethi» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukuhamba kwerokethi ephupheni: ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni
Irokethi iqala ephupheni- iyaqala!
Ukuba irokethi iqala ephupheni ebusuku, oku kunokubonakalisa ukuphazamiseka okukhawulezayo kwi el mundo yomlindo. Ukuba iya kwicala elilindelweyo okanye ukuba ubomi bujika ngendlela engathandekiyo, ubukhulu becala isesandleni sephupha. Ukuphuma ngokukhawuleza ngerokethi kubonisa amathuba kubomi bobungcali okanye babucala. Kwangelo xesha, kukho ilahleko yenyani. Uhlalutyo oluneenkcukacha ngemeko yangoku yobomi ngoku iluncedo kakhulu.
Ukubhabha kwi-rocket njengomphuphi: ngokukhawuleza kwaye akunakunqandwa
Ukubhabha ngerokethi ephupheni kungumqondiso olungileyo kunye nefowuni yokulumkisa. Njengeziqhushumbisi, iirokethi ezinamadoda ziqala ukubhabha zinyuke ziye ezantsi kweyona ndlela imfutshane. Uyakubona oku kuyo yonke imisebenzi yokubonisa umlilo kwi-New Year Eve.
Ukubhabha kwerokethi njengophawu lwephupha lezicwangciso kunye nemibono yabaphuphi kubonisa impumelelo ekhawulezileyo, enokuthi ngokukhawuleza iguquke isilele. Kuhlawula ukucwangcisa iiprojekthi ngononophelo.
Irokethi yengozi ephupheni: yintoni ebhabha phezulu, iyehla
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kuyibona ingozi yerokethi njengophawu lokuba ulumke kungekudala. Ukuphulukana nomntu okanye into ekhethekileyo kunokuba kukufuphi. Ukuba ufikelela kwiinkwenkwezi kwaye ulahlekelwe kukuzikhukhumeza, usongelwa ngokuwa okunzima. Ziqwalasele ngokunzulu! Ukuba ubetha i-roketi ngenqanawa ephupheni, oku kunokuba luphawu lokoyisa iingxaki.
Iirokethi ezithile kutoliko lwamaphupha.
Uhlalutyo lwamaphupha "iRocket Space Rocket": Kwiinkwenkwezi!
Kwinkcazo yemveli yamaphupha e-rocket yasemajukujukwini, umahluko uyenziwa nokuba umntu ophuphayo ubona irokethi ngaphandle okanye uhleli phezu kwakhe. Ukuba ubabukela umgama, uya kuba nethamsanqa kubomi bakho bobungcali kunye nabucala. Ukuba umphuphi ubhabha kwi-rocket yasesithuba la luna, Mars, Pluto, Neptune okanye ezinye iiplanethi, kunokwenzeka ukuba kukho umnqweno wokubaleka. Imeko yobomi yangoku ayonelisi. Utshintsho oluncinci kubomi bemihla ngemihla lunokukuthintela oku.
Ukuphupha abaqalisi beerokethi: imfazwe okanye uxolo?
Uninzi lwabantu lubona i-rocket launchers kumabonwakude. Lo mpu usetyenziswa emfazweni. Njengomfanekiso ephupheni, ibonisa isoyikiso esibonwayo. Ngapha koko, unobangela unokuba yingozi. Nangona kunjalo, ukutolikwa gwenxa kweziganeko ezithile nako kunokucingelwa. Nabani na okhe wabona i-rocket launcher ngexesha lemfazwe angawenza lo mbono emaphupheni abo. Ukuba la maphupha akhokelela kuxinzelelo olukhulu okanye uxinzelelo, kuyacetyiswa uncedo lonyango.
Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolikwa ngokubanzi
Irokethi ibonisa isibindi namandla njengophawu lokuphupha ekuchazeni amaphupha. Ukuphupha i-caresses umnqweno Imida y Imigama ukudlula. Oku kunokuba sisidingo sokushiya ngasemva ukusikelwa umda kweemeko zangaphandle okanye ukukhangela iindawo eziphakamileyo zokomoya. Nabani na odubula njenge roketi ephupheni uya kubonisa amandla afanayo kwiiprojekthi zabo.
Nangona kunjalo, isimboli yephupha inokuba sisikhumbuzo sokungafikeleli kwiinkwenkwezi ukuba iphupha elo mhlawumbi libeke iinjongo, ukufezekiswa kwalo kuyinto engekho ngqiqweni. Kuxhomekeka kwiimeko zobuqu, irokethi ekutolikeni amaphupha inokusetyenziswa njengesixhobo kunye nesilumkiso esivela kwi isoyikiso iqondwe ngaphandle.
Isimboli yephupha "yerokethi" ihamba ngokukhawuleza okukhulu, oko kukuthi, inyuka ngokukhawuleza njengoko isihla kwakhona. Oku kubonakala kutoliko lwamaphupha. phuhliso izicwangciso zamaphupha ezinokwenzeka. Bathembisa impumelelo ekhawulezileyo kwaye ngokukhawuleza baba kukungaphumeleli. Umphuphi kufuneka athembele ngakumbi ekuqwalaselweni kwesandi kunakwizithembiso eziphezulu.
Kwiphupha kutolikwa umahluko phakathi kwerokethi enyukayo kunye naleyo iye emhlabeni. Kwimeko yokuqala, uphawu lwephupha luthembisa amathuba kunye nezinto eziluncedo umntu anokuzisebenzisa, okwesibini ubhengeza unxibelelwano olubi. Ukuba ubona irokethi esibhakabhakeni ephupheni, oku kuthembisa ukukhula okuonwabileyo kwimiba yobungcali neyabucala.
Ukuba ubona iirokethi ngelixa ulele ezigcinwe kwizisele, kufuneka wenze ngononophelo kwihlabathi elivukayo kwaye ungathathi nengozi.
Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngenxa yobume bayo be-phallus, irokethi luphawu lokuphupha ngobuni besini. Amandla ayo kunye namandla abonisa ekutolikeni kwamaphupha isidingo sokwenza njalo okwakhiwa y ukwanda kokusebenza. Ukuphupha kusenokwenzeka ukuba unengxaki yokucinga ukungakwazi ukujamelana nesondo okanye ezinye iimfuno.
Irocket inyuka nayo inokubonisa ukuba kungenzeka ukuba uyaphupha Ukutsalwa uyaphoswa. Nokuba ukujonga oku njengengozi okanye umceli mngeni omnandi wokufezekisa iinjongo ezikude kuxhomekeke kwiimvakalelo ezivela ephupheni.
Isimboli yephupha "irokethi" imele amandla amakhulu okuqhushumba kwaye ibonakalisa isidingo sokuchazwa kwephupha. utshintsho olukhulu. Okukhona kunzima ukuba iphupha libe nefuthe kwimeko yobomi bakho, kokukhona usomelela imiqondiso yesilumkiso oyinikwa yi-subconscious yakho ephupheni.
Imeko yamaphupha okubhabha ngerokethi, mhlawumbi kwiplanethi ekude njengeMars okanye iiplanethi ezikude njengePluto, iMercury okanye iSaturn, lelona thuba lokuphela kobomi nakwilizwe lemihla ngemihla. Ukuba amaphupha ayaphindwa apho irokethi ibonakala njengekuphela kwendlela yokuphuma kubomi obonwa njengobungcungcuthekisayo, kufuneka kufunwe uncedo lonyango ukuthintela uxinzelelo.
Uphawu lwephupha «irokethi» - ukutolika kokomoya
Akukho ukuphakama kubonakala kukhulu kwaye akukho mgama umde kakhulu kwi-rocket. Njengophawu lwephupha, luphawu lokutolikwa kwamaphupha. ukufuna ngokomoya kwaye ngenxa yoko umngciphekoukuba ukuphupha kulungele ukungena kwindlela yayo egqithileyo.